Ejipta: Nirotsaka ny Alina, Taorian’ny Andron’ny Haromotana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Janoary 2011 7:59 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, srpski, Deutsch, বাংলা, Italiano, English
Raha nirotsaka handrakotra an'i Ejipta ny haizin'ny alina, nitohy hatrany kosa ny hetsi-panoherana tao Cairo sy nanerana ny firenena. Nobahanan'ireo zava-nitranga tao Tahrir Square any Cairo ny vaovao samihafa, izay nanaparitahan'ny polisy an'ireo mpitokona tamin'ny alalan'ny baomba mandatsa-dranomaso, bala fingotra, ary tifitra rano niafàra tamin'ny faharatràn'olona maro. Tany Suez, olona telo no voalaza fa maty. Tany Alexandria, fitokonana nataona olona an'arivony nanomboka tamina fisamborana. Tany El-Mahala, tanàn-dehibe iray ara-indostria sy ara-pambolena, nisy tatitra tanaty Twitter momba ireo polisy gaigy manimba fananan'olona tao El-Shoon square sy fifandonana teo amin'ny vahoaka sy ny polisy.
@Alaa nandefa tweet nilaza fa tena ilaina be mihitsy ny mpitsabo ao amin'ny Tahrir Square:
Nisy olo-malaza vitsivitsy tonga nanatevin-daharana ny hetsika, ary nanavao hatrany ny kaonty Twittern-dry zareo. Ilay mpisehatra Amr Waked sy Khaled Aboul Naga, ilay vehivavy mpanolotra fandaharana amin'ny fahitalavitra Bouthayna Kamel, ny tale Amr Salama, ary ilay mpanao politika Ayman Nour.
@Mohamed_A_Ali nandefa tweet avy ao amin'ny toerana nanaovana ny fitokonana:
Araka ny nambaran'ilay vehivavy mpanao politika malaza, Gameela Ismail, dia 40 raha kely ny olona voasambotry ny polisy ary nentina any amina toerana tsy fantatra, ka isan'izany ny zanany lahy Noor, Dr. Mostafa El Nagar, mpandrindra ankapobeny ny Fanentanana ho amin'ny Fanovàna, ny mpanao gazety Mohamed Abdelfattah, ary AbdelRahman Ayyash, mpianatra iray miofana ho injeniera izay tokony hiatrika fanadinana rahampitso any amin'ny fakiolte-ny.